uyilo Lwegumbi Lokulala | Eyekhala 2022
I-43 yeXabiso lokuHamba kwiiNdlu zeCloset kunye neMiyilo yoMququzeleli (Imifanekiso)
Wamkelekile kwigalari yethu yohambo oluphezulu lokunethezeka kwiingcamango zekhabethe. Indawo yokuhamba eyenzelwe kakuhle inokuba yindlela entle yokugcina iimpahla zakho, izihlangu kunye nezinto zokuncedisa apha a
Ukukhetha ubungakanani beebhedi sisigqibo esibalulekileyo esinokuthi senze intuthuzelo kunye nomgangatho wokulala. Jonga ubungakanani beebhedi ezithandwayo ukukunceda ukhethe ubungakanani bomatrasi obulungele wena.
Ezi ngcinga zokulala kwigumbi eliphezulu zinokukunceda ufumane uyilo olugqibeleleyo lwendawo yakho yokulala. Ukuhombisa nokucwangcisa uyilo lwefanitshala lwamagumbi okulala aphezulu kunokuba ngumceli mngeni ngenxa yolwakhiwo olwahlukileyo. Apha ngezantsi ufumana iindlela zokuyila ezingaphakathi kunye nabanini bamakhaya benza uyilo lwakamgangatho ophakamileyo lokulala kwaye ufumane ugqozi lokudala igumbi oza kulithanda.
Igalari yemifanekiso yezitulo ezijingayo ezipholileyo kwigumbi lokulala. Usihlalo ojingayo unokwenza indawo emnandi yokujija ngencwadi, okanye uphumle nje egumbini lakho. Fumana izimvo
Ezona zimvo zibalulekileyo zokuyilwa kwegumbi lokulala. Jonga imifanekiso yenkosi, indawo encinci kunye nesikwere sokubekwa kwebhedi kunye nokubekwa kwefanitshala ukwandisa indawo yakho
Imibala yeepeyinti zaMagumbi aBantwana (Iingcamango zoyilo)
Elona gumbi labantwana lipeyintayo imibala ukwenza uyolo kunye nokumema uyilo lwangaphakathi. Jonga imibala yepeyinti yamantombazana kunye neyamakhwenkwe onokuyisebenzisa ekhayeni lakho.
Iingcamango zokuGcina izihlangu zeCaroset (iiRacks kunye neeShelving Designs)
Igalari yeengcamango zokugcina izihlangu egumbini lokulala kubandakanya uyilo lobunewunewu kunye nendlela yokuququzelela ii-racks kunye neeshelfu. Jonga uyilo lwe-closet yezihlangu onokuzisebenzisa ukukhuthaza
Uyilo lweGumbi lokulala eliyi-40
Ezi uyilo lokulala kwigumbi lokulala yingqokelela yeendlela zegumbi elinempahla entle. La magumbi okulala ayenziwe ngabaqulunqi bangaphakathi abaphambili kwaye bayakunika
35 Ukuhamba okuhle kwiiCloset Clothing
Ukuhamba okuhle kuyilo lwekhabethe oluboniswe kwigalari yemifanekiso kuya kukunika iitoni zemibono kunye nenkuthazo. Iimpahla zokuhombisa zesiko elinobugcisa
Ukuguqula igumbi lokulala kwigumbi lokulala
Isikhokelo sokujika igumbi lokulala kwigunjana elinendleko kunye neengcebiso zoyilo ezithandwayo zokugcina iimpahla kunye nokuhombisa. Guqula igumbi lokulala uye kwigunjana lokuhamba
Igumbi lokulala elakhelwe ngaphakathi (Iingcamango zoyilo)
Igumbi lokulala ngokwakhiwa kwe-ins yoyilo ngeentlobo ezahlukeneyo zeekhabhathi, iishelufa zeencwadi, iikhabhathi kunye nezihlalo zefestile. Jonga imifanekiso yamagumbi okulala ane-in-ins
California King vs King (Umahluko wobungakanani bematrasi)
Isikhokelo senkosi yaseCalifornia vs imibhede yokumkani kubandakanya umahluko kubungakanani, indawo engaphezulu kunye nexabiso. Khangela ukuba iking king okanye ibhedi yokumkani ilungile.
Iingcamango zegumbi lokulala laseFama
Igalari yezimvo zangoku zokulala kwifama kunye nendlela yokuhombisa ukufezekisa olu hlobo. Jonga imifanekiso yendlu yangoku yefama yokuhombisa kunye noyilo.
Indawo yokuhlala kwigumbi lokulala Imibono
Igalari yegumbi lokuhlala kwindawo yokulala yokudala indawo yokumema yokufunda kunye nokuphumla. Jonga imifanekiso yeendawo zokuhlala kwigumbi lokulala.
Fumana iingcebiso zethu ngeendlela ezingabizi kakhulu zokuhombisa igumbi lokulala lamantombazana akwishumi elivisayo kubandakanya nemibono yepeyinti, yokuhombisa kunye neefenishala. Ukuhombisa uyilo lwamantombazana okwishumi elivisayo ..
Iingcamango zeGumbi lokulala le-Attic (Uyilo oluhle)
Igalari ekwabelana ngayo ngeengcinga zokulala kwigumbi eliphezulu Jonga imifanekiso yoyilo lokulala kwigumbi lokuphefumlela.
Iingcamango zeGumbi lokuBelana ngeNkwenkwe kunye neNtombazana
Jonga uyilo lwenkwenkwe nentombazana ekwabelwana ngalo ngamagumbi usebenzisa iindlela ezahlukeneyo zoyilo, ukugcinwa, ifenitshala kunye nemibala. Ukwenza uyilo ekwabelwana ngalo kwigumbi lokulala lenkwenkwe nentombazana kunokuba ngumceli mngeni. Apha sabelana ngezinye zeyona nto intle yoyilo kunye nenkwenkwe yokulala yoyilo ngezimvo kunye nenkuthazo.
Igalari entle yemifanekiso yeengcamango zokulala ngokwesiko lokulala. Uya kufumana uyilo lwegumbi lokulala, imibono yokuhombisa, imibala yepeyinti, ifanitshala kunye nolwakhiwo lwegumbi lokukunceda
Fumanisa ukuba ungalifumana njani igumbi lokulala le-Feng Shui elifanelekileyo ukuze kubekho indawo enoxolo enokubangela ukulala okungcono kunye nokunyusa amandla. Ubugcisa bexabiso leFeng Shui
intetho kanina kunyana emtshatweni
myalezo mni oza kuwubhala kwikhadi lomtshato
amakhonkco esithembiso eblue kuye
Ubume bophahla lwerosesud